जनताको न्यायालयमा मेरो पक्षमा फैसला : भक्तिराम अधिकारी – Chitwan Post
जनताको न्यायालयमा मेरो पक्षमा फैसला : भक्तिराम अधिकारी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १० स्थित स्याउलीबजारका ६२ वर्षीय भक्तिराम अधिकारी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा नं १० को वडाअध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । ०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू भएसँगै नारायणी माविबाट नेविसंघको विद्यार्थी राजनीति सुरू गरेका उनले ०३२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण भएलगत्तै लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर टिकौली तालिम केन्द्र (तत्कालीन गैंडा गस्ती) मा २० वर्ष जागिरे जीवन बिताएर अवकास प्राप्त गरे । कर्मचारी संघमा आवद्ध रहेका उनी तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा डा गंगाधर लम्साल भूमिसुधार राज्यमन्त्री हुँदा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाए । विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध रहेर सामाजिक तथा शैक्षिक उन्नयनमा उनले योगदान दिएका छन् । अथर्ब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा दुई कार्यकाल अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका उनी नारायणी उमाविको स्वर्ण महोत्सवमा आर्थिक संयोजक तथा सल्लाहकार, भरतपुर उमाविको सल्लाहकार, नेपाल बाल संगठन बालमन्दिरका सञ्चालक हुँदै जिल्ला सहकारी संघका सञ्चालक समिति सदस्य, स्याउलीबजार टोल सुधार समितिको अध्यक्ष र हाल सल्लाहकारलगायत विभिन्न संघसंस्थामा रहेर सामाजिक कार्यमा जुट्र्दै आएका अधिकारीसँग आसन्न स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा चितवन पोष्ट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको कुराकानी–
१) भरतपुर महानगरपालिकाको मुटु मानिने वडाबाट तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
–वडा नं १० को समग्र विकास गर्न र विभिन्न चरणमा भएका नागरिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न मेरो उम्मेदवारी हो । यस वडाको पहिचानअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र भरतपुर विमानस्थलका वरपरका बासिन्दाहरुको समस्यालाई सदाको लागि समाधानको खोजी गर्न मेरो उम्मेदवारी हो । यस्तै, सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती हटाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन, नमूना र स्मार्ट वडाका रुपमा विकास गर्न मेरो सशक्त उम्मेदवारी हो ।
२) प्रतिस्पर्धीको उम्मेदवारको कसीमा तपाईं कति योग्यतम उम्मेदवार हुनुहुन्छ ?
–यस वडामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रुपमा मैले एमालेलाई लिएको छु । चुनाव भनेकै प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतान्त्रिक पद्दति हो । मैले यस वडामा गरेका बाटो, ढल निर्माणलगायतका विकासमुखी कामका बारेमा यहाँका टोलवासीलाई अवगतै छ । कामका आधारमा र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी मलाई मतदान गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । योग्य उम्मेदवार भएकैले पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।
३) वडा विकासका लागि भावी योजना के छ ?
–मैले प्रमुख समस्याका रुपमा भरतपुर विमानस्थल वरपरका जनताले भोग्नुपरेका कठिनाइलाई देखेको छु । विमानस्थल वरपरका बासिन्दाले नगरपालिकामा नक्सापास नहुने, बैंकले ऋण नदिने, जहिले पनि डरत्रास बोकेर बस्नुपर्ने समस्या भोगिरहेका छन् । यसको व्यवस्थापनका लागि विशेष पहल गर्ने छु । वडाभित्रका हस्पिटल र घरबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, हाकिमचोक, चौबिसकोठी र वीरेन्द्र क्याम्पसअगाडि आकासे पुल वा अण्डरग्राउण्ड क्रस रोड बनाइ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्ने योजना छन् ।
यस्तै। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्ग, बालबालिका, दलित, जनजाति, आदिवासी, मुीसलमलगायत पछिडावर्गको उत्थान र समृद्धि गर्ने, अव्यवस्थित बजार र हाटबजारलाई व्यवस्थित बनाउने, वडाभित्रका विभिन्न मठमन्दिरहरुको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने, गेष्टहाउस चौरलाई खेल मैदानका रुपमा विकसित गर्ने, सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुमा बालमैत्री वातावरण सिर्जना गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नेलगायतका भावी योजना हामीसँग छन् ।
४) तपाईं पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का ज्वाइँ र डा गंगाधर लम्सालका भान्जाका रुपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । प्रचण्डसँग वैचारिक एकता किन हुन सकेन ?
– नाता सम्बन्धले म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बहिनीज्वाइँ र डा लम्सालको भान्जा जरुर हुँ । म दाहाल परिवारमा साइनो गाँस्नुअघि अर्थात् २०२८ सालदेखि नै कांग्रेसमा लागेको इमान्दार कार्यकर्ता हुँ । मैले २०३२ सालमा प्रचण्डकी साइली बहिनीसँग बिहे गर्दा प्रचण्ड गोर्खाको विमोदय माविमा शिक्षण गर्नुहुन्थ्यो । मेरो बिहेमा उहाँ उपस्थित हुनु हुन्थेन । पत्रद्वारा वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिनुभएको थियो । प्रचण्डसँग भेटहुँदा उहाँले एकपटक व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘मैले बिहे गरेर दिएका सबै बहिनी, छोरी वामपन्थी परे । बुबाले बिहे गरेर दिनुभएको तपाईँ एकजनामात्रै कांग्रेस पर्नुभयो । तपाईँ कांग्रेसमा पनि नरम खालको कांग्रेस हुनुहुँदोरहेछ ।’
प्रचण्डसँग नातासम्बन्ध जोडिएको भए पनि हामीबीच कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह छैन । पारिवारिक भेट भइरहन्छ, त्यो स्वभाविक कुरा हो । भावनात्मक एकता र सम्बन्ध सुमधुर छ । तर, आस्थाको एकताचाहिँ छैन । मेरो आफ्नो लगनशीलता र इमान्दारिताले गर्दा कांग्रेसबाट टसमस नभइकन निरन्तर रुपमा लागिपरेको छु । म कांग्रेस नै रहेर मर्ने छु यसमा कुनै सन्देह छैन ।
५) तपाईंको नेतृत्वमा वडावासीले कस्तो परिवर्तनको अनुभूति गर्लान् ?
–स्थानीय निकायको निर्वाचनले जनतालाई दिएको अधिकारअनुरुप आफ्ना प्रतिबद्धताहरु इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्ने छु । इच्छाशक्ति र संकल्प बोक्ने हो भने वडावासीमा परिवर्तन ल्याउन असंभव देख्दिन म । यसअघि पनि मैले विकास निर्माणका गतिविधिहरुमा सक्रियतापूर्वक लागिपरेको व्यक्ति हुँ । टोल विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चोकदेखि हस्पिटल रोडसम्म आफ्नै सक्रियतामा पिच सडक निर्माण गरी केही रकम टोलसुधार समितिमा जम्मा गरेर बाटो निर्माण खर्च गर्ने निर्णय गरी राखिएको छ । मैले प्रतिबद्धता गरेका योजनाहरु अक्षरशः पालना गर्ने छु ।
६) चुनाव जित्ने सुनिश्चितता के देख्नुभएको छ ?
–जनता न्यायाधीश हुन् । न्यायाधीशले सही फैसला गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ । जनताको न्यायालयले मेरो पक्षमा फैसला गर्नेमा म ढुक्क छु ।
वन्यजन्तु मार्नेलाई कडा सजायको प्रावधान, १० लाख जरिवाना, १५ वर्षसम्मको कैद
विदेश पलायनले उब्जाएको समस्या